रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डमा मारिएका नवराज विकसहित अन्य मृतकका परिवारद्वारा न्याय नपाए अन्दोलनको चेतावनी « Pariwartan Khabar
रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डमा मारिएका नवराज विकसहित अन्य मृतकका परिवारद्वारा न्याय नपाए अन्दोलनको चेतावनी
3 January, 2021 12:49 pm
काठमाडौँ । रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डमा मारिएका नवराज विकसहित अन्य मृतकका परिवार तथा आफन्तहरुले सरकारसंग निष्पक्ष छानबिनसहित न्यायको माग गरेका छन् । आज शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पिडित परिवार र उनका आफन्तहरुले न्याय नपाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् । हत्याकाण्डको नौ महिना बितीसक्दा पनि पिडित परिवारले न्याय नपाएको भन्दै सरकारसंग पुनः निष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोक चन्द विश्वास विकले उक्त मानवता विरुद्व अपराध भएको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा यो घटना घटेको थियो । कानुन बमोजिम दण्ड दिनुपर्छ ।’ उक्त घटना जातिय विवादले गर्दा घटेको बताऐ । घटना चानचुने नरहेको उनले बताए । उनले भने,न्याय कहाँ छ? के यो देशमा न्याय मरेकै हो त? न्यान सबैलाई एक समान हुनु पर्छ भन्दै उनले आक्रोश पोख ।
कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पिडित जनताको साझाँ थलो रिपोर्टर्स क्लब रहेको बताए । उनले भने, ‘मृतक परिवारलाई अभिनन्दन गर्दछु । तपाईहरु ढुक्क हुनुस दाषीहरु न्यायको कठघरामा उभिन्छन्। तीन करोड नेपाली जनतालाई भावबिवल बनाएको बताए ।’ पिडित परिवारको एजेन्डालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउछु भन्दै उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मलाई न्यायलय प्रति आशा र भरोसा छ । पिडितलाई न्याय दिनेछ । अपराधीलाई दण्ड दिनेछ । न्याय मूर्तिले सही निर्णय लिने छ ।’ यो देशमा एउटा आन्दोलनको सुरुवात गरेर छुवाछुत र जातिय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रीपाठीले रुकुम घटना सभ्यता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताए । उनले भने, ‘मानवतामाथिको कलङक थियो । घटनाले नेपालको अन्तराष्ट्रिय बैजति भएको थियो । रुकुमको घटनामा न्याय हुनुपर्छ । जो अडण्डित हुन्छ भने विधिको शासन छैन् ।’ अपराध नै नगरी जातिय विभेदका कारण बालकहरुको क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘रुकुम घटनामा न्याय भएन भने विधिको शासन, लोकतन्त्र र अदालत मर्नेछ । दोषी पुर्पक्षका लागि जेल बस्नै पर्छ।’
नवराज विकका बावु मोहनलाल विकले केटीको आमा लक्ष्मी मल्ल एक लाख धरौटीमा छुटेको र अन्य दोषी पनि सामान्य तरिकाले छुटेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो कस्तो न्याय हो । सर्वोच्चबाट न्याय पाउने आशा गरेका छौँ ।‘
गोविन्द शाहीकी आमा देवी शाहले राज्यले न्याय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन् । उनले भनिन्,‘हामी न्याय पाउन काठमाडौँ आएका हौँ । न्याय नपाए र दोषीलाई कारवाही नभए हामी आन्दोलन गर्नेछौँ । ’ प्रहरी प्रशासनको कमजोरीका कारण शव ढिला पाएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी पार्टी र नेतालाई चिन्दैनौँ ।’ सन्जिब विककी आमा सीता विकले कहाँ छ कानुन भन्दै प्रश्न औँल्याइन् । उनले भनिन्,‘हामी बाहुन क्षेत्री वा अन्य जात भएको भए न्याय पाउने थियौँ । तर, दलित भएको कारण न्याय पाएका छैनौँ । हामीले न्याय पाउँदैनौँ त?’
लक्ष्मी सुनुवारले हत्या काण्डको दोषी कारवाही गर्नेमाग गरिन् र मुख्य दोषीलाई केटीलाई बालबालिका भनेर छोडेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यो केटीलाई सुधार केन्द्र राख्नु पर्छ । केटीकी आमालाई जेल हाल्नुपर्छ ।’ उनीहरुलाई आफ्नै तरिकाले कारवाही गर्ने बताइन् ।